Izindaba - Izidingo zokulondolozwa kokuqukethwe okulungile kwesikulufa sokuzijula
Izidingo zokulondolozwa kokuqukethwe okulungile kwesikulufa sokuzifaka
Isikhunta sokuzigwedla siyingxenye yemishini eyisisekelo, edingeka kakhulu. Imvamisa, ama-bolts, ama-screws, ama-rivets, njll, ukuze kuqinisekiswe ukuphepha noma ngokuvamile akudingi ukubheka ithonya lokushisa, indawo embi noma ezinye izimo zokusebenza eziyingozi. Izinto ezijwayelekile yinsimbi yekhabhoni, insimbi ye-alloy ephansi nezinsimbi ezingekho ngaphansi. Kepha ezikhathini ezithile, izinto zokwakha ezisheshayo kudingeka zihlangabezane nemibandela yokugqwala okukhulu noma amandla aphezulu, kunezinsimbi eziningi ezingenamandla ezingenasisekelo nezinsimbi ezingenamandla ezingenasici ezivelayo. Lezi zinkinga eziyisithupha ezilandelayo kufanele zinakwe lapho usebenzisa futhi ugcina ucingo lomsila wokumba:
1. Inqubo yokukhipha izintambo zomsila wokudonsa iyaphuthuma kakhulu futhi idinga ukuqaphela kakhulu. Ngesikhathi senqubo, kuzoba nezinsalela ngaphezulu kocingo lomsila wokumba. Lesi sinyathelo ukugeza ngemuva kokuthi umshini wokuhlanza i-silicate ugezwe.
2. Ngesikhathi senqubo yokuluka, isitaki kufanele sihlanganiswe, ngaphandle kwalokho i-oxidation encane izokwenzeka ku-oyili yokuqothula.
3. Kuzovela izinsalela ze-phosphide emhlophe ebusweni bezikulufo eziphezulu, okukhombisa (iphuzu 1) ukuthi ukuhlolwa akunakwa ngokwanele ngesikhathi sokusebenza. 4. Into emnyama ebusweni bezingxenye ikhiqiza ukubuyiselwa kwamakhemikhali, okubonisa ukuthi ukwelashwa okushisa akwenziwa kahle futhi okusalayo kwe-alkaline ebusweni akususwanga ngokuphelele.
5. Izingxenye ezijwayelekile zizokugqwala lapho kugqekeza, futhi amanzi asetshenziselwa i-rinsing kufanele aguqulwe njalo.
6. Ukugqwala ngokweqile kukhombisa ukuthi uwoyela wokuqothula usetshenziswe isikhathi eside kakhulu, futhi udinga ukungezwa noma ukushintshwa.